Australian Retrievers: Inokurumidza-Kuchenjera uye Yakazara nekunakidzwa - Inobereka
Australian Retrievers: Inokurumidza-Kuchenjera uye Yakazara nekunakidzwa
Fungidzira magamba ako maviri aunofarira. Zvino fungidzira kuti vanobatanidza masimba avo kugadzira iyo mhedziso gamba.
Izvo zvakanaka chaizvo zvakaitika ne Australian Retriever , inozivikanwawo nemazita akasiyana, kusanganisira Goridhe Aussie , YeAustralia Goridhe Retriever , Mufudzi weAustralia Retriever , uye Mufudzi weAustralia weAustralia .
Sangana neGolden Retriever & YeAustralia Mufudzi musanganiswa
Iyi furry yakaputsika ihwo hunyanzvi hune simba hunokuchengetedza pazvigunwe zvako munzira dzese dzakanakisa. Ramba uchiverenga kuti uwane zvimwe!
Kwakatangira iyo Australian Retriever
Chii chinonzi Golden Aussie chinotaridzika?
Chii chaunotarisira kubva kuAussie Retriever's temperament?
Kuve neGolden Australia Mufudzi
Vafudzi veGoridhe veAustralia vane hutano here?
Kutsvaga wekuAustralia Mufudzi Retriever mbwanana iri kutengeswa
Ndiyo yekufungidzira yeAustralia Retriever yako yakakwana chipfuyo?
Zvinotendwa kuti muchengeti weAustralia ane basa rekugadzira iyi yakasanganiswa imbwa. Zvinoenderana nedzidziso, muberekesi akayambuka mutema weAustralia Mufudzi aine yake yeGolden Retrievers muna 2007 na2008.
Kubva ipapo, iyo yekuyambuka yakave ichizivikanwa nemasangano aya: American Canine Mbeu dzakauchikwa Club (ACHC), Dhizaini Imbwa Kennel Kirabhu (DDKC), Imbwa Registry yeAmerica (DRA), uye International Dhizaini Canine Registry (IDCR).
Zvino, ngatiendei kumbwa dzakatanga iyi yakanaka yakasanganiswa mhando.
Vafudzi veAustralia: Iyo poo yeimba
Sangana neMufudzi weAustralia
Kunyangwe nenzvimbo iri muzita ravo, yazvino Vafudzi veAustralia haina kubva kuLand Down Under.
Madzitateguru avo achangoburwa akatangira muBasque Nyika muEurope, asi rudzi rwacho rwakanatswa uye rwukafarirwa muUS.
Kuberekwa kufudza zvipfuwo, Masangano vari imbwa dzinoshanda kusvika pakati .
Inozivikanwa yavo hunhu hwekushanda uye njere , Mufudzi weAustralia is shoo-in yemarudzi ese emabasa e canine, kubva pakutsvaga uye kununura kurapa.
Golden Retrievers, imwe yemhando dzinodiwa dzeAmerica
Sangana neGolden Retriever
Yakagadzirirwa kudzosa shiri dzemvura, Vanodzosera Goridhe (kana Goldens kwenguva pfupi) ndeimwe mhando dzakatsaurwa.
Tinogona kutenda Dudley Marjoribanks weScotland nekutipa iyo yeGolden Retriever pakati pema1800.
Kunze kwemarara ematsvuku anotora, imwe tsvana yeruvara yakamira. Marjoribanks akayambuka mwana neiyo zvino-yakatsakatika Tweed Mvura Spaniel . Vana vavo vakapa nzira yanhasi yeGolden Retriever.
Kwemakore, Golden Retrievers yakava anodiwa mhuka dzinovaraidza dzemhuri . Ivo vanogara vakaenzana mu pamusoro 5 yeAKC 'Akakurumbira Zvizvarwa' rondedzero .
Chimwe chezvinhu zvinotonhorera nezve Australia Mufudzi-Goridhe Retriever muchinjikwa ndechekuti hapana imbwa mbiri dzinotaridzika zvakafanana. Iwe unogona kutenga vana kubva kumatara mamwe chete, uye imwe neimwe inogona kupedzisira iine akasiyana maitiro.
Aussie Retrievers anowanzove yemitambo, akaenzana-akaenzana mafuremu izvo zvinokweretesa ivo kuzviita uye kurovedza muviri.
Nemaziso anodziya anogona kunge ari shades e bhuruu kana shava , yako Australian Retriever musanganiswa ndeyechokwadi kuva stunner. Nzeve dzavo dzinodonha parutivi rumwe nerumwe rwemusoro wavo wakafara, uye yavo yakatenderera, mhuno nhema ndidzo tsumo Cherry pamusoro.
Iyo Aussie Inotora mvura-inodzosera jasi mbiri inogona kuve musanganiswa we chena, nhema, shava, brindle, blonde, kana goridhe mavara. Ivo vanogona zvakare kuve nehunhu mutsvuku kana bhuruu merle yeAustralia Mufudzi.
Huru yavo inogona kunge iri pakati nepakati, yakareba wavy kana yakatwasuka, asi inowanzo kuve neyakaomarara.
Mufudzi wako weGoridhe weAustralia angangopedzisira ave neiyo wakareba, muswe une hunyoro yeGolden Retriever. Izvi hazviwanzo zvakadaro, zvakadaro.
Mamwe maAussies akaomeswa anozvarwa aine miswe ine bobbed. Zvichienderana nevabereki vemuputi wako, vanogona kuve nemuswe wakazara, kana inogona kunge ipfupi zvekuti zvinoita sekunge havana kana zvachose.
Iko kukura kwakakura sei kweAustralia Retriever?
Zvichienderana nemabereki avo ekuberekesa 'machati machati, yako Aussie Goridhe inofanirwa kusvika pakazara kwavo pakati 12 kusvika 16 mwedzi yemakore . Vakuru vanowanzo rema pakati Makirogiramu makumi matatu kusvika makumi matanhatu (14 kusvika 27 kg) uye mira 19 kusvika 23 inches (48 kusvika 58 cm) kureba.
Unosarudza chimwe chinhu padyo nehukuru-hukuru? A Mini Goridhe Aussie inogoneka kana mumwe kana vaviri vabereki vane iyo Miniature American Mufudzi uye Miniature Goridhe Retriever .
Kunyangwe hazvo pasina mutsauko weAustralia Retriever wakanyanya kukura, rudzi urwu rwuri isina kuitirwa kugara mufurati . Nemweya yavo yekuenda, aya canine anokura mudzimba dzine huru, dzakakomberedzwa mayadhi.
Iyi fido ndeye chipfuwo chinoshamisa chemhuri dzinoshingaira . Ivo vanowirirana nevana veese mazera, uye vanoumba hukama hwepedyo nemunhu wese ari muhomwe yavo.
Tora sekondi kuti utarise iyi vhidhiyo ye fluffy merle puppy uchinakidzwa neimwe nguva yekutamba kuseri nevanhu vavo:
Muchokwadi, maAustralia Retrievers vanoda mhuri dzavo zvakanyanya zvekuti vangasarudza kuve navo 24/7.
Vanogona kutsungirira kuva vega kwenguva pfupi, asi dzinoda kudyidzana uye kukurudzira . Pasina izvi, vafudzi veGoridhe veAustralia vanogona kutendeukira kune hunoparadza maitiro kuti vagone kusagadzikana uye kupatsanurwa kunetseka. Semhedzisiro, uyu musanganiswa haifanire kugara kana kurara panze .
Kuti utapire hari, maGolden Aussies ari imbwa dzakanaka , kunyangwe nevatorwa. Kana iwe uchinakidzwa nekutambira nekuvaraidza, haufanire kunetseka nezve yako Australia Mufudzi-Goridhe Retriever musanganiswa kuyedza kutyisidzira vashanyi vako.
Shamwari sezvavanogona kuve, Aussie Mufudzi Retrievers vanogona kuve ne nzvimbo yenzvimbo . Ivo vanogona kuwana chengetedzo yemunhu wavanoda, kana ivo vanogona nguruve dzinodiwa zvinhu mumba.
Ramba uine ziso pavana uye dzimwe mhuka dzinovaraidza kana matoyi ari kubatanidzwa panguva yekutamba. Yako Golden Aussie inogona kusarudza kuti vaneta nekugovana, uye iwe unoda kuve padhuze kuti uve nechokwadi chekuti munhu wese anotamba zvakanaka.
Aussie Retrievers vane hunhu hwevarindi , zvakare. Kunyangwe ivo vasingahukure zvakanyanya, ivo vanodisa kukudzivirira kubva kune zvingangotyisidzira kana kana paine chimwe chinhu chisina kunaka.
Rutivi rwavo rweAussie runoita ivo vafudzi vane hunyanzvi , saka vana vadiki nekatsi chenjerai! Zvichienderana nekuti akasimba sei majini ekufudza, unogona kuwana ako madiki epaketi mitezo yakaunganidzwa dzimwe nguva.
Kwete kunetseka nekuti izvi zvekufudza zvisikwa zvinopera zvishoma nezvishoma imbwa yako painokura. Iwe unogona zvakare kutora matanho ekudzidzisa mwana wako nevana vako zvekuita kana hunhu uhwu hukasimuka.
Chinhu chimwe chisingazombosakara ndeako Aussie Golden's rambunctious mweya . Ivo rudo kutamba, kutora, uye kurarama hupenyu nekusiya. Mwana wako anogona kukura akareba, asi achaita haumbofi wakakunda mbwanana-yavo kunge mufaro .
Sangana naLoki, iyo Golden Retriever-YeAustralia Mufudzi musanganiswa - Mufananidzo sosi
Neraki, kudzidzisa rudzi urwu ndiko kufamba mupaka imbwa.
Aussies uye Goldens ndiwo mamwe emhando dzakangwara kwazvo dzenyika canine, saka yako Australian Retriever yakavimbiswa kwazvo kuve anokurumidza kudzidza . Vanoda kurovedzwa, uye izvi zvinokutendera kuti ubvise hunhu hunhu kubva pakutanga chaipo.
Panongouya mwana wako kumba newe , tanga kuisa tarisiro. Iwe unoda kudzivirira zvisina kufanira kufudza kana nharaunda maitiro asati atombotanga.
Kamwe kana wako weAustralia Mufudzi-Goridhe Retriever musanganiswa wajekerwa zvizere, tanga kuenda navo kumakirasi ekuteerera uye pamitambo yekutamba.
Kubatanidza kushamwaridzana nekudzidzira maitiro muhupenyu hwavo hwese kuchavadzidzisa maitiro zvakakodzera kudyidzana nedzimwe imbwa uye nevanhu . Izvo zvakare zvinovachengeta kubva pakuva vanonyanya kuve varidzi ve zvavo munhu waunoda. Zvakare, zvinobatsira simbisa nzvimbo yako semutungamiri asingatyi pack .
Ivo havazombove vakura zvakanyanya kune hutsva hutsva. Uyezve, kuenderera mberi kwekusimudzira kwepfungwa kwakakosha kune uyu mufaro wekuyambuka. Shandisa kudzidziswa senguva yekubatana nembwa yako nekurera zvido zvayo.
Nekutenda, kutarisira kweAustralia Mufudzi-Goridhe Retriever kusanganisa kwakanaka chaizvo, futi. Ramba uchiverenga kuti uone izvo chete zvaunofanira kuita kuti uchengetedze pooch yako inofara uye ine hutano!
Kushambidzika: Vanodzosera Australia vanodurura?
Ehe. Uye sezvo zvine mwero kusvika kune anorema makhedheni , kukwesha kaviri pasvondo kunowanzo kukwana. Iwe unogona kugara uchikwesha kazhinji kazhinji kuti kuderedze kuteurwa. Asi haUFANIRA kuveura imbwa iyi.
Rangarira iro jasi mbiri ratakambotaura kare, handiti? Iyi yechipiri bvudzi rebvudzi rinodzivirira yako Goridhe Aussie imbwa kubva kune zvakasikwa uye inomubatsira iye kudzora muviri wake tembiricha.
Kuveura kunoderedza kugona kwejasi kuita basa rayo uye kunogona kukonzera kusagadzikana nekukuvadza imbwa yako.
Imbwa ine hutano yeAustralia Mufudzi Mufudzi - Mufananidzo sosi
Kuchengeta iyo mbiri jasi mumamiriro epamusoro kuchaita kuti yako yeGolden Aussie iite kashoma kuda kugezwa .
Isu tinoziva zvinoita kunge zvinopesana, asi chengetedza yakazara-pamabhati ekuti pazvinenge zvakakodzera. Ndiyo nzira yakanakisa yekuchengetedza iwo chaiwo mairi mune yavo fur.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge Kana mwana wako achiunza zvekunze mukati, shandisa bhurasho kana nyoro pukuta kuvachenesa. Kana vakasviba zvisingaite uye nemvumo yemamiriro ekunze, vadzinge kunze. Ingo usashandise sipo!
Izvo zvakasara zve runako rweAustralia rweGolden Retriever harutore nguva . Kamwe pazuva kana zvakadaro, iwe uchazoda kutarisa iwo anoyevedza fuzzy nzeve yezviratidzo zvezvipukanana kana marara.
Usakanganwa kukwesha mazino ake mazuva ese uye trim nzara dzake imwe neimwe vhiki.
Ndeipi yakanaka imbwa chikafu cheAussie Retriever?
Chikafu chakakwana chinosiyana kubva imbwa imbwa. Anoshanda canines anowanzoita zvakanyanya nekudya ine mapuroteni mazhinji , uye uku kuyambuka hakuna kusara. Sarudza yemhando yepamusoro yakaoma kibble yakagadzirirwa fidos yepakati- kusvika kune akakura ane simba. Inofanirawo kunge yakakodzera zera rechipfuwo chako, huremu, uye hutano zvinodiwa.
Inenge maviri kusvika matatu makapu ezvekudya zuva nezuva ichaita kuti pooch yako ichengetedzwe, wozopatsanurwa kuita chikafu chamangwanani nedineni. Dzivisa kuwandisa uye kupa-kwemahara kudzikisa njodzi yekuzvimba uye isina hutano uremu.
Kushandisa yako Golden Aussie
Vanyanyisa kusimba, iyi inogona kungova imbwa yako. Goridhe Aussie Vafudzi vari zvine simba kwazvo uye kudiwa kanokwana maminitsi makumi matanhatu ekurovedza muviri pazuva .
Isu tinofanirwa kujekesa kuti huwandu uhu hwekurovedza muviri ndihwo zvisinga gadzirisike .
Haisi chokwadi kana iwe wakagadzirira kune isina kuvhiringidzwa awa ye cardio mazuva ese? Pfungwa isina kujairika ndeyekuti chiitiko ichi chinoda kuitika zvese kamwechete. Zviri zvirinani kupararira kudzidzira imbwa yako zuva rese. Vimba nesu, majoini aFido nemhasuru zvichakutenda nezvazvo.
Pamwe chete neaya mitsara, yako pup 'yekurovedza regimen inofanira kusanganisira zvinopfuura kufamba kana kumhanya nepaki.
Chiitwa chemuviri chinotyisa, asi maAustralia Retrievers anotumbuka kana zvido zvavo zvepfungwa zvasangana, futi. Kuchengeta uropi hwavo hunofara, sanganisa zvine mwero-kureba kufamba pamwe nekutamba uye zvikamu zvekudzidzisa.
Inzwa wakasununguka kunongedza zvinhu kumusoro . Ivo kusava nehanya nekupisa kana kutonhora kwemamiriro ekunze , chero. Izvi zvinorevei kwauri? Zvakawanda sarudzo!
Vanoda kumhanya zvakasununguka munzvimbo dzakashama-dzakavhurika, vachidzingirira mafungu kumahombekombe, kunyangwe kukwira makomo! Hakuna gomo rakanyanya kureba, kana iwe ukabvunza aya canines.
Zvirongwa zvekurovedza muviri hazviwanzo kuve zvinosanganisira nzendo dzemumunda, zvakadaro. Tinya padivi rako reGolden Aussie Shepherd's retriever, uye unetese navo nemutambo wekare wekutora. Ingo ita shuwa kuti uri mu nzvimbo yakazara-yakakomberedzwa vasati vavarega vachitamba-leash.
Pane imwe nguva Australian Retriever yabata kunhuhwirira, vakasungwa uye vakatsunga kuitevera. Dzidzira hunyanzvi hwekurangarira nguva dzose, uye tarisa kuti uwane mutobvu murefu saka vanogona kutambanudza makumbo avo vasina kutora rwendo rwemunda rwavo.
Kufanana nemarudzi ese, Aussie Golden Retrievers inokanganisa kune mamwe mamiriro ehutano.
Icho chikamu chembwa muridzi iyo hapana mumwe wedu anofarira kufunga nezvayo. Asi paunonyanya kuziva nezve imbwa yako njodzi zvinhu, zvichave nyore kuzoona zvingangoitika zvinetso zvehutano.
Uine Golden Aussies, iwe unoda kutarisa kunze kwezviratidzo zve matambudziko eziso , senge cataract uye colobomas . Kune zvakare kusagadzikana utachiona, allergies, bloat, uye hudyu dysplasia .
Yako yeAustralia Retriever inogona zvakare kugara nhaka yezvakanangana nezvehutano. Golden Retrievers zvinosuruvarisa mukurumbira nekuva nekenza, nepo Multidrug Kunzwisisa yakajairika muAustralia vafudzi.
Neraki, kunyangwe paine dzimwe njodzi dzehutano, Aussie Goldens anorarama kwenguva yakareba. Nekugara uchishanyirwa vet uye kutarisirwa kwakaringana, veAustralia Vanotora vanonakidzwa neupenyu hwe Makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu .
Mufudzi weAustralia Retriever puppy - Mufananidzo sosi
MaAustralia Retrievers haatengeki achienzaniswa nemamwe emhando dzekugadzira. Mitengo yembwa idzi inotangira pa $ 300 kusvika $ 900 .
Nekuti iyi hybrid ichiri nyowani uye isingawanzo, kutsvaga muberekesi kana kennel iyo inongobereka chete Australia Mufudzi-Goridhe Retriever musanganiswa kunogona kuoma.
Izvo hazvireve kuti hazvigoneke, zvakadaro.
YeAustralia Goridhe Retriever vafudzi & makennels
Kana iwe watoita yako yekutsvagisa uye uine chivimbo kuti iwe unokwanisa kubata ichi chakayambuka, isu takawana mamwe mawebhusaiti ane Golden Aussies ekutengesa kana kutorwa.
Vanogona zvakare kuve nemimwe michinjikwa yeAustralia yeMufudzi neyeGolden Retriever misanganiswa inogona kukufadza. Heano nzvimbo shoma dzekutarisa:
Vafudzi veAustralia Furever (Rancho Cucamonga, CA)
Western Australia Mufudzi Kununura (Sheridan, WY)
Neuse Rwizi Goridhe Retriever Kununura (Raleigh, NC)
Isu takawanawo a Facebook peji yakatsaurirwa kuAustralia Retrievers, uye tinofunga kuti zvakakodzera kutarisa.
Sangana naDaisy, iyo Aussie Goridhe musanganiswa wembwanana - Mufananidzo sosi
Kunyangwe iwe wakarohwa nerudzi urwu, iwe unofanirwa kubvuma kuti Aussie Goldens ane zvakawanda zvekupa.
Ivo vanoda mhuri dzavo , vanofarira kutamba, uye vanofarira kudzidza. Ivo vanonakidzwa chaizvo nekurovedza muviri uye zvinoda varidzi vanoshanda neakawanda stamina.
Iwe unofunga iwe unogona kuramba uchienderana neAustralia Retriever? Regai tizive mune zvakataurwa!
Chii chinonzi Schutzhund uye nei chakanakira imbwa yako?
Ndeapi echirungu Goridhe Retrievers uye ndinofanira kuwana imwe?
black great dane ine chipfuva chichena
American red nose pitbull puppy
nzira yekuwana marabhu esirivha
imbwa dzine vhudzi refu